स्वर्ग वा नर्क पुगेपनि, दुधकोशी सामुदायिक अस्पतालबाट जनताले सेवा लिएको हेर्न पाँउ : स्व. भीम बहादुर राई – dudhkoshionline
अलविदा भीम बाजे ! अलविदा !
जीन्दगीको के छ र भर,
अजम्बरी को नै छ र,
भाविले लेखेको कसले छ देखेको ।
गीतकार सुरज गैरेले लेख्नुभएको गीतको शब्द जस्तै, यो संसारमा अजम्बरी त को नै छ र …ढीलोचाँडो न रहेछ, तर अवश्य एकदिन यो संसारबाट बिदा भएर सबैजना जानैपर्ने…।
कुन भेट र कुन बोली अन्तिम हुने हो, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन ।
मलाई पनि के थाहा, दुई दिन अगाडि भीम बाजेसँगको भेट र कुरा अन्तिम हुन्छ भनेर । दुई दिन अगाडि मात्र बाजेसँग भेट हुँदा ठीकै छु भनेर सुनाउनुभएको थियो । अकल्पनिय त्यो खबर, पत्यार लागेकै थिएन । तर अन्ततः बाजेले हामी सबैलाई सदाको लागि छाडेर जानुभयो ।
भावनाले बनेको कतिपय सम्बन्धहरु कति प्रगाढ अनि अविष्मरणीय हुने रहेछन्, की कसैले सदाको लागि छोडेर जाँदा पनि मनमा उनै मानिसहरुले छाडेका छापहरु रहीरहने । आवाजहरु कानमा गुञ्जिरहने ।
८४ वर्षको उमेरमा पनि स्वस्थ व्यक्ति । पहिलो पटक कुराकानि गर्नेलाई उहाँको बोली र स्वभाव अलि कडा लागेपनि उहाँको स्वभाव साधारण थियो । बच्चाहरुलाई खुब माया गर्नुहुन्थ्यो ।
हरेक वर्षको दशैँ र तीहारको बीचमा भेट हुन्थ्यो बाजेसँग । बाजे (हजूरबुबा) ले मलाया लाहुर जाँदा र पल्टनको नम्बरीहरुका कुराहरु खुब सुनाउने गर्नुुहुन्थ्यो । अनि हाम्रो गाउँ यस्तो थियो । मान्छेहरु यस्ता थिए, भनेर प्राय सुनाइरहनुहुन्थ्यो । बाजेको कुराहरु सुन्न रमाईलो लाग्थ्यो ।
उहाँसँगको कुराकानीकोे आधारमा रहेर उहाँको बारेमा गतवर्ष, पाँच सय शब्दको छोटो कथा (लेख) तयार पारेकी थिँए । पछि आजको न्यूज अनलाईनमा पोष्ट भएको थियो । खुब खुशी हुनुभएको थियो । पछि त्यही कथा पढेर केही आफन्तहरुले कमेण्टमा लेख्नुभएको कुरा सुनाएकी थिँए ।
….हा..हा..हा ….हाँस्दै भन्नुभएको थियो, ‘म बुढो मान्छेको कथा सबैले पढे की के हो ।
अनि फेरि थप्नुभयो, ‘म बाँचेको बेला त लेखिदिइस, म मरेपछि पनि लेखिदीन्छस नी ?
हरेक भेटमा दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल निर्माण हुँदै गरेको बडो उत्साहको साथ सुनाउनुहुन्थ्यो । निर्माणाधिन दुधकोशी सामुदायिक अस्पताल र प्राविधिक शिक्षालय अवलोकनका लागि जाने उहाँको दैनिकी नै बनेको थियो ।
उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, “मैले अस्पतालको लागि जग्गा दे’को छु । राम्रो अस्पताल बन्दैछ । अस्पताल बनेर सबैकुराको चाँजोपाँजो मिलीसकेपछि हाम्रो गाउँको मान्छे उपचारको लागि अन्त जानैपर्दैन । ठूलो अस्पताल हो यो । अनि अबदेखि ईन्जीनियर पढ्नको लागि पनि सुविधा यहि आएको छ ।”
हरेक पटकको भेटमा अस्पताल निर्माणको कुरा सँगै गाउँपालिका प्रमुख असीम राईको खुब खुलेर प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो ।
उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “हाम्रो गाउँ ले खुब राम्रो मान्छे पायो । त्यही भएर गाउँमा बिकास हुँदैछ । अस्पताल बन्दैछ, रोड बन्दैछ, बैँक आयो । मैले त्यही बैँकबाट पेन्सन निकाल्छु । कति सजिलो कति ।” (उहाँले भन्नुभएको कुरा जस्ताको तस्तै)
जन्म र मृत्यु बिचको कुरा,
हुँदैन सबै चाहेका पूरा ।
गीतकार सुरज गैरेले लेख्नुभएको गीतको शब्द जस्तै, चाहेका सबै पूरा त नहुने नै रहेछन् ।
अस्पताल बनीसकेपछि घरछेवैको अस्पतालले पुर्याउने सेवा सुविधा हेर्ने उहाँ (स्व. भीमबहादुर राई) को अन्तिम ईच्छा थियो ।
उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो,– “हुन त म यो अस्पताल बनिसक्दासम्म बाँच्छु कि बाँच्दीन, तर बनिसकेर डाक्टरहरु आएर काम गरेको हेर्ने ठूलो रहर छ । म बाँचिरहे भने त देख्न पाँउछु, मरेर गए पनि अस्पताल राम्रो बनोस । सबैलाई सुविधा होस ।”
भन्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म मरेर स्वर्ग वा नर्क पुगेपनि, गाउँको अस्पतालबाट जनताले राम्रोसँग सेवा सुविधा लिएको हेर्न पाँउ । सबैलाई भलो होस ।”
हरेक भेटमा गाउँको विकासको बारेमा चासो लिइरहने अग्रज व्यक्ति आज हामीबाट सदा सदाको लागि टाढा हुनुभएको छ । तपाईको हरेक मीठा शब्दहरु मन मस्तिष्कमा रहिरहनेछन् । अनि तपाईले समाजमा पुर्याउनुभएको महत्वपूर्ण योगदानहरु सदा सदाको लागि अविष्मरणीय हुनेछन् ।
बाजे, तपाईको मृत्युले हामी सबैजना स्तब्ध छौँ ।
तपाईको आत्माले स्वर्गमा पास पाओस ।
अलविदा भीम बाजे । अलविदा !
(स्व. समाजसेवी भीमबहादुर राई सोलुखुम्बु जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका ६ मुक्लीमा निर्माणाधीन दुधकोशी सामुदायिक अस्पतालको जग्गादाता हुनुहुन्थ्यो । उहाँको यहि मिति २०७७÷०८÷०५ गते ८४ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो ।)
गतवर्ष आजको न्यूज अनलाइनमा पोष्ट गरिएको लेख…
थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका ६ सोलुखुम्बूका भीमबहादुर राई अहिले ८३ वर्ष पुगे । तर जोस र जाँगर भने १८ वर्षे युवाको जस्तो छ । उनलाई चस्मा लगाएर हिँड्न साह्रै मन लाग्छ रे । खानामा दाल, भात, दही, दूध, घ्यू खाने गर्छन् रे उनी ।
(गार्डेन राईद्धारा लिखीत लेख)
नेकपा सचिवालयको बैठक आज दिउँसो